टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट पाँच खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै, ल्याउलान् पदक ? « Yoho Khabar
टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट पाँच खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै, ल्याउलान् पदक ?
काठमाडौँ – ग्रिस्मकालिन ओलम्पिक शुक्रबारबाट जापानमा सुरु हुदैछ । विश्वका २ सय ६ राष्ट्रले खेल्ने ओलम्पिकलाई विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला नै मानिन्छ । त्यहि कुम्भ मेलामा नेपालका ५ खेलाडीले चार खेलमा प्रतिस्पधा गर्दैछन् । विगतका संकरणमा राम्रो नतीजा ल्याउन नसकेका नेपालीले यसपटक कस्तो प्रदर्शन गर्लान् त ?
३२ औं संस्करणको गृष्मकालीन ओलम्पिक आगामी शुक्रबारदेखि जापानमा शुरु हुँदैछ । टोकियो २०२० नाम दिइएको यस ओलम्पिककामा नेपालबाट चार खेलमा ५ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । युनिभर्सियालिटी प्लेस अन्तर्गत पौडीबाट गौरिका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथ्लेटिक्सबाट सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस्तै वाइल्ड कार्डबाट सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोका सोनिया भट्ट ओलम्पिकका लागि छानिएका छन् ।
पौडी, सुटिङ र जुडोका खेलाडीहरु जापान पुगिसकेका छन् । एथ्लेटिक्स खेलाडी भने उद्घाटनको भोलिपल्ट अर्थात् जुलाई २४ मा जापान प्रस्थान गर्नेछन् । यसपटक नेपालबाट ५ खेलाडी र ४ प्रशिक्षकसहित २६ जनाको टोली जापान जाने सूचीमा समावेश छ । पौडीका दुई खेलाडी र प्रशिक्षक जुलाई ८ देखि जपानको ताकुशिमामा विशेष प्रशिक्षणमा छन् । उनीहरु मंगलबार ओलम्पिक भिलेजमा जानेछन् ।
एथ्लेटिक्स खेलाडी लगायत बाँकी पदाधिकारी भने जुलाई २४ मा जानेछन् । खेलाडी र प्रशिक्षक बाहेक पनि १६ जना अन्य पदाधिकारी जापान जानेछन् । नेपालबाट यस पटक चार खेलाडीले पहिलो पटक ओलम्पीकमा सहभागिता जनाउदै छन् । गौरिका सिंहले भने यसअघि नै ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेकी छन् र टोकियो ओलम्पिक उनको लागि दोस्रो सहभागिता हुनेछ । एलेक्स, सरस्वती, कल्पना र सोनियाको लागि यो पहिलो अवसर हो । गौरिका रियो ओलम्पिक २०१६ मा सबैभन्दा कान्छी खेलाडी बनेकी थिइन् ।
ओलम्पिक उद्घाटन भएको भोलिपल्ट अर्थात् जुलाई २४ मै नेपालका दुई खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । जुडोमा सोनिया भट्ट र सुटिङमा कल्पना परियारले नेपालको चुनौती पेश गर्नेछन् । सोनियाले महिला ४८ केजीमुनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । यस्तै सुटिङकी कल्पनाले महिला १० मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । दुवै खेलाडी वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिक खेल्न छनोट भएका हुन् । त्यस्तै, जुलाई २७ मा नेपाली पौडी खेलाडी एलेक्स शाहको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उनले पुरुष १०० मिटर फ्रिस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपालको राष्ट्रिय कीर्तिमानधारी एलेक्सको लक्ष्य टोकियोमा व्यक्तिगत टाइमिङ सुधार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा पनि सुधार गर्नु हो । जुलाई २७ मा हिटमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हिट चरणमा उत्कृष्ट भएमा जुलाई २८ मा हुने सेमिफाइनलमा छनोट हुनेछ । यस स्पर्धाको फाइनल जुलाई २९ मा हुनेछ । त्यस्तै, जुलाई २८ मा नेपालकी अर्की पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । उनले महिला १०० मिटर फ्रिस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । यस इभेन्टमा गौरिकाको नाममा राष्ट्रिय कीर्तिमान रहेको छ । गौरिकाको लक्ष्य पनि टोकियोमा व्यक्तिगत टाइमिङ सुधार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा पनि सुधार गर्नु हो । त्यस्तै, जुलाई ३० मा नेपालको लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एथ्लेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरीले महिला १०० मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् ।